Abavelisi bee-Polyquaterniums kunye nababoneleli - i-china Polyquaterniums Factory
IPolyquaternium-1, ekwabizwa ngokuba yiPolidronium Chloride, PQ-1, is a detergent-type preservative derived from BAK.Yenziwe phakathi kwiminyaka yoo-1980 ngu-Alcon njengendawo yokulondolozwa kwezisombululo zokugcina iilensi. uxinzelelo kumathambo e-ophthalmic kwi-glaucoma, izisombululo zezinyembezi ezingezizo kunye neendlela eziphezulu zokuthambisa. Iiparamitha zoBugcisa eziPhambili: (1) 95 ~ 100% Powder: Inkangeleko yeAmber kumdaka omnyama omdaka oqinileyo Ngaphandle kokukhuthaza Ukonyibilika kwamanzi ...
IPolyquaternium-6 (PQ-6) ngumlingani osebenza kunye nomsebenzi ophezulu we-cationic, ibonelela ngesiphumo esihle sokulungiswa kweemveliso zononophelo lweenwele.Polyquaternium-6 icacile kulwelo olunombala otyheli, ocacileyo. Kulula ukunyibilika emanzini, kodwa akukho lula ukutsha. Inesisombululo esomeleleyo sokujiya kwesisombululo samanzi, ayisiyiyo ifom yejeli kwaye ihlala izinzile kuluhlu olubanzi lwe-pH. I-anti-chlorine kunye nokuxinana okuphezulu kwetyala Iparameter zobugcisa: Inkangeleko engenambala kwi-visc encinci etyheli ...
I-Polyquaternium-7 ihlawuliswe kakhulu ii-cationic copolymers eziphuculweyo zokuphucula ukuhambelana kunye nokucaca kweenkqubo ze-anionic. Ezi copolymers ziyacetyiswa ukuba ziphucule iipropathi ezimanzi nezomileyo zeemveliso zokhathalelo lweenwele, kunye nokwenza ngcono ukuziva kwiimveliso zokhathalelo lolusu. Iparameters zobugcisa: Chwetheza i-YR-PQ7A YR-PQ7B YR-PQ7C YR-PQ7D Inkangeleko ecacileyo kulwelo olubonakalayo olubonakalayo oluQinisekileyo 8.5 ~ 9.5% 8.5 ~ 9.5% 8.5 ~ 9.5% 41 ~ 45% pH (1% emanzini) 6.0 ~ 7.5 6.0 ~ 7.5 6.0 ~ 7.5 3.3 ~ 4.5 Viscosity (# 4 @ 12rpm ...
IPolyquaternium-10 ineempawu ezintle, i-antistatic, intsebenzo, ukulungisa iinwele ezonakalisiweyo, ukwenza iinwele zithambe, zihambe kakuhle kwaye ziguquguqukayo.I-Polyquaternium-10 yipolymer ye-cationic e-soluble enamanzi ehambelana nazo zonke iintlobo ze-surfactant. Ngentsebenzo elungileyo yokuqina, i-antistatic, imeko, ukuthambisa, inokulungisa iinwele ezonakeleyo, kwaye inyuse ukudibanisa kunye nokuthambisa kwiinwele, kunye nokunciphisa ukucaphuka okubangelwa zii-surfactants, ukulungisa ukuzikhusela kwesikhumba, ukuhambisa ukuthambisa, ukuthambisa kunye ne-el .. .
I-Polyquaternium-11 50% luhlobo lwethu olutsha lwePolyquaternium-11, yityuwa ye-quaternary ammonium yetyuwa eyenziwe kukusabela kwe-diethyl sulphate kunye ne-copolymer ye-vinyl pyrrolidone kunye ne-dimethyl aminoethylmethacrylate. Ikwiklasi yemichiza eyaziwa ngokuba yi-quaternary ammonium compounds (ebizwa ngokuba yi "Quat"). IPolyquaternium-11 50% isisisindo esisezantsi seemolekyuli xa kuthelekiswa nePolyquaternium 20%, Miscible ngamanzi kunye neethanol, ivumba elincinane. Polyquaternium-11 Iipesenti ezingama-50 ...
I-Polyquaternium-11 yityuwa ye-quaternary ammonium yetyuwa eyenziwe kukusabela kwe-diethyl sulfate kunye ne-copolymer ye-vinyl pyrrolidone kunye ne-dimethyl aminoethylmethacrylate. Ikwiklasi yemichiza eyaziwa ngokuba yi-quaternary ammonium compounds (ebizwa ngokuba yi "Quat"). IPolyquaternium-11 sisisombululo esinamandla esine-aqueous, Miscible ngamanzi kunye ne-ethanol, ivumba elibonisa kancinci. IPolyquaternium-11 lilifu, umququ -imibala yefilimu yangaphambili kunye ne-anti-static agent.Isebenza njenge c ...
I-Polyquaternium-22 yipolymer yokwenziwa eyenziwe nge-acrylic acid kunye ne-diallyldimethylammonium chloride, iPolyquaternium-22 yipolymer ye-amphoteric, uxinizelelo oluphezulu, ukufuma, kunye ne-pH yoluhlu olubanzi (1-14). Ezi copolymers ziyacetyiswa ukuba ziphucule iipropathi ezimanzi nezomileyo zeemveliso zokhathalelo lweenwele, kunye nokwenza ngcono ukuziva kwiimveliso zokhathalelo lolusu. Iparameter zobuGcisa: Chwetheza i-YR-PQ22A YR-PQ22B YR-PQ22C Inkangeleko ecacileyo ukuya kumthubi omncinci otyheli, ulwelo olunombala oQinisekileyo 39 ~ 43% 39 ~ 43% 35 ~ 40 ...
Iipropati: IPolyquaternium-28 yityuwa ye-quaternary ammounium yetyuwa ene-Vinylpyrrolidone kunye ne-dimethlaminopropyl methacrylamide monomers.Isebenza njengearhente yokwenza ifilimu kunye nokwenza izinto, iyenza icace, ibhetyebhetye kodwa akukho bhanyabhanya ibonakalayo, kwaye inikezela ukuthambisa kunye nokuzinza okuhle kwe-hydrolysis phantsi kwezantsi okanye phezulu Ixabiso le-PH, ibonisa ukuhambelana okuphezulu kuninzi lwe-non-ionic kunye ne-amphoteric surfactants.
Iipropati: IPolyquaternium-39 yipolymer ye-amphoteric, uxinizelelo oluphezulu lokuhlawula, ukufuma, kunye ne-pH kuluhlu olubanzi (1-14). Ezi copolymers ziyacetyiswa ukuba ziphucule iipropathi ezimanzi nezomileyo zeemveliso zokhathalelo lweenwele, kunye nokwenza ngcono ukuziva kwiimveliso zokhathalelo lolusu. Iiparameter zeTechniacl: Chwetheza i-YR-PQ7A YR-PQ7B YR-PQ7C Inkangeleko ecacileyo ukuya kumthubi omncinci otyheli, ulwelo olunombala oQinisekileyo 39 ~ 43% 39 ~ 43% 35 ~ 40% pH (1% emanzini) 4.2 ~ 5.3% 2.5 max. 4.0 ~ 5.5 Viscosity (# 3 @ 12rpm, 25 ℃) 3,000 ~ 6,000 4,000 ~ 15,00 ...
I-Polyquaternium-51 yipolymer yokunyibilikisa i-biomimetic eyilelwe ukulinganisa ulwakhiwo lwe-phospholipid membrane. Inesakhiwo esikhethekileyo se-amphiphilic kwaye inokuthi ibambelele kwi-stratum corneum, ibonakalise ifuthe lokuthambisa ulusu. Okwangoku, iPolyquaternium-51 ikhusela ulusu kugonyamelo lwendalo: Ukuphucula isithintelo, kunye nokunciphisa ilahleko yamanzi e-Trans Epidermal. Iindawo zokuhlambela Cinezela ukucaphuka kwabasebenza kumatshini woku ...